अब ‘स्मार्ट’ लकडाउन : के हो यो खासमा?
काठमाडौं । सरकारले अब ‘स्मार्ट लकडाउन’ गर्ने तयारी गरेको छ । कोरोनाभाइरस (कोभिड-१९) व्यवस्थापन निर्देशक समितिको दोस्रो बैठकले संक्रमणको जोखिम रोक्ने र सँगै अत्यावश्यक वस्तु उत्पादन र आपूर्ति सहित ‘स्मार्ट लक डाउन’ तर्फ जाने निर्णय गरेको हो ।
कोभिड नियन्त्रणका लागि सबै भन्दा महत्वपूर्ण र अनिवार्य तत्व खोप नै भएको उल्लेख गर्दै उनले त्यसका लागि ४० लाख डोज खोप ल्याउन गृहकार्य भइ रहेको आगामी साउनदेखि लगाउन थालिने बताए । त्यसबाहेक अन्य देशसँग पहल प्रयत्न भइरहेकोले खोपको अभाव क्रमशः हल हुँदै जाने उनले बताए । कोभिड १९ कुनै एक निकायकको मात्र जिम्मेवारी नभएको बताउँदै प्रधानमन्त्रीले सबै मन्त्रालय र निकायले समन्वयात्मक ढंगले काम गर्न पनि निर्देशन दिए ।
खासमा के हो स्मार्ट लकडाउन ?
कोरोना संक्रमण थपिँदै गएपछि त्यसलाई नियन्त्रण तथा रोकथामका लागि सरकारले २०७६ चैत ११ गतेबाट देशभर लकडाउन सुरु गरेको हो । लकडाउनको समयमा मानिस घरबाट बाहिरसम्म निस्किन पाएनन् । त्यसको एक वर्षपछि फेरि दोस्रो लहरको कोरोना संक्रमण फैलियो । अहिले काठमाडौं उपत्यका लगायत देशका ७५ जिल्लामा निषेधाज्ञा जारी रहेको छ । तर, फेरि लकडाउन, निषेधाज्ञापछि ‘स्मार्ट लकडाउन’ गर्ने सरकारको तयारी छ ।
दोस्रो पटक बुधवार प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बसेको बैठकले स्मार्ट लकडाउन गर्ने निर्णय गरेसँगै यसको चर्चा चुलिएको छ । यस्तै बुधबारको बैठकले वैदेशिक रोजगारीको लागि विदेशमा गएका र अलपत्र रहेका नेपालीहरूलाई फिर्ता ल्याउनको लागि हवाई उडान सञ्चालन गर्ने निर्णय गरेको छ । टर्की, कतार, साउदी अरेबिया, मलेसिया, युएई, जापान जस्ता राष्ट्रमा गएका नेपालीहरूलाई फिर्ता ल्याउन यस्तो निर्णय गरिएको हो ।
‘निषेधाज्ञा र लकडाउनभन्दा अर्को विकल्प हो स्मार्ट लकडाउन । यसमा मानिसले केही सहज अनुभूति गर्छन् । सबै क्षेत्रमा बन्देज लगाइएको हुँदैन, कोभिड-१९ सङ्कट व्यवस्थापन केन्द्र सीसीएमसीको प्रमुख पूर्वरथी बालानन्द शर्माले भने ।
लकडाउन गर्दा सार्वजनिक तथा निजी यातायात सबै बन्द गरिएको थियो । निषेधाज्ञामा भने केही सवारी साधनलाई खुकुलो बनाइएको थियो । त्यसपछि कोरोना संक्रमण कम हुँदै जाँदा सवारी साधनमा जोर बिजोर प्रणाली लागू गरियो । जोरबिजोर प्रणाली अनुसार करिब आधा सवारी साधनमात्र सडकमा देखिएका थिए । तर, अब यहि प्रक्रिया स्मार्ट लकडाउनमा फरक हुने बताइएको छ ।
अब जोरबिजोर नभएर सवारी अन्तिम सङ्ख्याको आधारमा निर्धारण गरिने बताइको छ । सवारीको अन्तिम सङ्ख्या ० देखि ९ सम्म हुन्छ । त्यसलाई वर्गीकरण गरेर ० देखि ३ सम्म आइतबार, ४ देखि ७ सम्म सोमबार ८ र ९ बुधवार जस्तै गरेर सञ्चालनमा ल्याउन तयारी गरेको छ ।
त्यस्तै, अन्य व्यापार व्यवसाय पनि स्मार्ट लकडाउनमा खुल्ला हुनेछन् । अहिले जस्तो अत्यावश्यक, खाद्यान्न लगायत पसलहरूमा मात्र खुला हुनेछैन । समितिले तयार पारेको स्मार्ट लकडाउन मोडिलाटी अनुसार सबै पसलहरू खुल्ने छ । तर, समय निर्धारण गरिनेछ । जस्तो खाद्यान्नलाई ९ बजेसम्म, लत्ताकपडा, इलेक्ट्रिक पसल १० देखि १२ बजेसम्म, हार्डवेयर पसल तथा अन्य पसलहरू १ देखि ४ बजेसम्म गरेर पसलको वर्गीकरण गरेर खोलिने बताइएको छ ।
स्मार्ट लकडाउनको अर्को मोडालिटीमा अनलाइन व्यापारहरूलाई पनि प्रोत्साहन गर्ने बुझिएको छ । प्रशासनले जारी गरेको निषेधाज्ञा अझै प्रभावकारी देखिएको खण्डमा स्मार्ट लकडाउन नलगाएर निषेधाज्ञालाई नै प्राथमिकता दिने विषयमा समेत छलफल भइरहेको एक अधिकारीले बताए ।